बजारमा सुनको भाउ बढेसँगै सर्वसाधारणहरु सुन किन्नभन्दा बेच्न लागेका छन्, आजको भाउ ? – " कञ्चनजंगा News "
बजारमा सुनको भाउ बढेसँगै सर्वसाधारणहरु सुन किन्नभन्दा बेच्न लागेका छन्, आजको भाउ ?
No Comments on बजारमा सुनको भाउ बढेसँगै सर्वसाधारणहरु सुन किन्नभन्दा बेच्न लागेका छन्, आजको भाउ ?
काठमाण्डौ – नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढेसँगै सर्वसाधारणहरु सुन किन्नभन्दा बेच्न लागेका छन् ।
शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ अहिलेसम्मकै महंगो तोलाको ६५ हजार पुगेपछि आफूसँग भएकाे सुन बिक्री गर्नेको संख्या बढेको हो ।
मूल्य बढेको मौकालाई अवसरका रुपमा लिनेले आफूसँग भएको सुन बेच्ने गरेका छन् । सिजन पनि नहुनु र भाउ पनि महंगो हुँदा बजारमा कारोबार ठप्प जस्तै रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताउनुभयो ।
अहिले सुनका गहना किन्ने भन्दा पनि बेच्न खोज्नेको संख्या बढी रहेको उहाँको भनाइ छ । सुनको मूल्य बढेपछि बिक्रीमा भने कमी आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेका कारण नेपाली बजार प्रभावित भएको हो । बजारमाग दुई दिनमै घटेको छ ।
यसअघि दैनिक २५-३० किलोसम्म कारोबार हुने गरेकोमा अहिले दैनिक २० किलो पनि कारोबार नभएको शाक्यले बताउनुभयो । शाक्यका अनुसार मूल्य अझै बढ्ने अनुमान छ । सुन किन्नुपर्ने वा बेच्नुपर्ने उपभोक्तालाई आवश्यकताअनुसार किनबेच गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।
← इञ्चार्ज तथा जनकपुर ब्यूरो सदस्य कुमार पौडेल दोहोरो भिडन्तमा नमारिएको- नेकपा विप्लव → निलम्बनमा परको सांसद रेशम चौधरी बिरामी परेपछि वीर अस्पताल भर्ना गरिएको छ,सिक्रीले बाँधेर उपचार गरिएको काम अमानवीय भएको आलोचना